All News and Announcements Department of Civil Engineering Department of Architecture Department of Electronic Engineering Department of Electrical Power Engineering Department of Mechanical Engineering Department of Mechatronic Engineering Department of Information Technology Department of Myanmar Department of English Department of Engineering Mathematics Department of Engineering Physics Department of Engineering Chemistry
Virtual Design World Cup 2019, Japan
" Mg Khant Shein Thaw, Mg Kan Khant Khine and Mg Sai Kaung Si Thu "
from fourth year architecture won " Nomination Award " in the 9th Virtual Design World Cup 2019 competing for Advanced Architectural and Civil Engineering Designs.
Team: "S & K" (Technological University, Hmawbi)
Title: Future Aqua City Osaka
Theme: OSAKA Dream Island, the Future City for Entertainment
Supervisor: Prof. Dr. Nandar Linn
Virtual Design World Cup 2020, Japan
from fifth year architecture won " Excellence Award " in the 10th Virtual Design World Cup 2020 competing for Advanced Architectural and Civil Engineering Designs.
Team: "The Three Tarzans" (Technological University, Hmawbi)
Title: Futuristic Evergreen
Theme: Future Mobility Lifestyle in Kalimantan, Indonesia's New Capital known as the "Forest City"
Department of Architecture Library Inauguration Ceremony
#မှော်ဘီဗိသုကာဌာနရဲ့ စာကြည့်တိုက်ကလေးကို ၂၀၂၀ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က အဆင့်မြှင့်တင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ ပုံများ\_ပါ။
# ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာလကတည်းကစခဲ့တဲ့ ဒီ‌ Library Interior Project ရဲ့ ထူးခြားချက်က လက်ရှိပထမနှစ်ကနေ မဟာဗိသုကာတန်းအထိ ကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ စ-လယ်-ဆုံး ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှူနဲ့ ပြီးမြောက်ခဲ့တာပါ။
#ဗိသုကာဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ သင့်တင့်တဲ့ စာကြည့်တိုက်ရပ်ဝန်းလေးတခု ဖြစ်ပေါ်လာရေး ပြုပြင်စရိတ်နဲ့ စာအုပ်များလှူဒါန်းပေးခဲ့ကြတဲ့...
+ ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ မှော်ဘီဗိသုကာကျောင်းသားဟောင်းစီနီယာ အစ်ကိုအစ်မများ၊
+ မြန်မာ - ဂျပန် - ထိုင်းနိုင်ငံများမှ အာခီတက် မမများ
+ Modular Architects Co. Ltd.
‌တို့ကို မှော်ဘီဗိသုကာမိသားစုမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
+ Project စ လယ် ဆုံး တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်‌ခဲ့ကြတဲ့ ဗိသုကာဌာနမှူး ပါမောက္ခ‌ေဒါက်တာနန္ဒာလင်း ၊ စာကြည့်တိုက်တာဝန်ခံ ဆရာမဒေါ်ညွန့်ညွန့်အောင်နဲ့ ပဉ္စမနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊
+ Project Coordination မေတ္တာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ကိုမြတ်ကောင်း (WEER) ၊
+ Interior Painting တာဝန်ယူပေးတဲ့ ဆရာမဒေါ်အေးမြတ်စု နဲ့ Jotun Paints Co. Ltd.
+ မတ် ၁၂ ၊ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲအတွက် ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ ဆရာမဒေါ်သိင်ဂီဝင်းထက်နဲ့ စီနီယာ ဂျူနီယာကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံး၊
+ ကြွရောက်ဂုဏ်ပြုပေးကြတဲ့ ဗိသုကာဆရာမများနှင့် ပြင်ပ ဧည့်သည်တော်များ အားလုံး...
ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်
Title defence seminar for graduation design thesis
10.2.2020 ရက်နေ့တွင် final year Graduation design thesis title defence ကျင်းပြုလုပ်ရာ ဗိသုကာဌာနမှ ဆရာမများ အပြင်ပြင်ပ ဗိသုကာလောကမှ Architect များပါ external examinar များအဖြစ်််််််် လာရေောက် ဆွေး နွေး ပေးခဲ့​ကြသည်။
Lecture for Architectural Design studio
ဗိသုကာဌာန၏ ဧည့်ကထိက ဒေါက်တာ ဇွဲနိုင်ထင်မှ third year ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏Architectural design studio ဘာသာရပ်အား သင် ကြားပို့ချ ပေးခြ​င်း။